"Mutengi Kutanga" Inofanira kunge iri iyo Mantra | Martech Zone
Kubata simba reakawanda ehunyanzvi ekushambadzira matekinoroji kufambisa kwakanaka kwebhizinesi, asi chete kana iwe uchichengeta mutengi wako mupfungwa. Kukura kwebhizinesi kunovimba netekinoroji, ichi ichokwadi chisina kutaurwa, asi chakakosha kupfuura chero chishandiso kana chidimbu che software ndizvo vanhu vauri kutengesera.
Kusvika pakuziva mutengi wako kana vasiri mumwe munhu chiso nechiso kunounza matambudziko, asi iro rakazara vhoriyamu yedata yekutamba nevanoreva savvy vashambadziri vanogona kuwana yakafara mufananidzo kupfuura nakare kose. Kuteedzera chaiwo metric uye kuita chairo pasocial media ongororo inoita kuziva vatengi vechokwadi zvirinyore kupfuura nakare uye zvinobatsira kusimudzira kunzwisisa kwako kwevatengi base.
Sei Tarisiro yeVatengi neSevhisi zvachinja
Vatengi vakave vanopfuura kungwara pamaitiro avanogona kuwana zvigadzirwa, kunyanya nekukura kwemagariro enhau. Uye, zvakare, izvi zvave kureva kuti zvavanotarisira zvave zvakanyanya kudzvinyirira. Ichi chikumbiro hachifanirwe kuonekwa zvisina kunaka nemhando sezvo iri mumwe mukana wekupa rakakura basa revatengi uye zviitiko, uye kuratidza mhando yekambani yavo.
Yechokwadi-yenguva sevhisi sevhisi yave tsika, ne imwe ongororo inoratidza kuti 32% yevatengi vanotarisira mhinduro kubva kuchiratidzo mukati memaminitsi makumi matatu, iine imwezve 30% inotarisira chimwe chinhu kudzoka mukati memaminitsi makumi matanhatu, kungave panguva ye "maawa ehofisi" kana husiku kana kupera kwevhiki.
Mhando yezvigadzirwa zvemartech zvakagadzirwa kuunganidza uye kuongorora data zvakabatsira zvakanyanya, iine webhusaiti analytics yakabatanidzwa padhuze nehukama hwekutevera, CRM dhatabhesi, uye manhamba ane chekuita nekutora kana kusaina-nhamba. Huwandu hwakawanda hwemhando dzakasiyana dzedhata hunobvumidza kurongeka mukunongedzera vatengi vechinangwa nekuumba mushandirapamwe wako zvinoenderana.
Izvi zvakawanda zvekugadzirisa uye kuramba uri pamusoro, uye zvinonzwisisika kuti mucherechedzo unganetse kuchengetedza zvese zvakarongeka. Ichi chikonzero nei kuisa mari muhunyanzvi tekinoroji kuchinyanya kukosha uye nei kushandisa masocial intelligence maturusi uye software kunze uko kunokosha. Kubatsira kufambisa yako data manejimendi kuti ibatsirwe nevatengi vako zvinhu zvinotevera zvinofanirwa kuve zvekufunga kwepamoyo.
Kuziva zviri kuitwa nevakwikwidzi vako kwakakosha mukuwana kodzero nezvakaipa mukati mekambani yako. Unogona kudhizaita vakwikwidzi vako nekungoteedzera zvavo kubudirira uye kukundikana zvakanyanya uye nekupinda mune zvavanofarira nezvisingadiwe zvemuchinjikwa-pamusoro pevateereri nhengo.
Mukukwikwidza kuteedzera uye kuenzanisa kunokutendera iwe kuti uwane chinzvimbo chako mukati meindasitiri yako uye ushande kunatsiridza pazvinenge zvakakodzera. Iwe unogona kuongorora iwo mamwe marudzi emametric kubva kune ako makwikwi 'zviitiko zvekushamwaridzana sezvaunoita zvako, kuyeranisa iwo asina maturo metric kupesana neyakawanda yakajeka data iwe yaunogona kuunganidza.
Target Vateereri Kufaira
Neruzivo rwakawanda pamusoro pevateereri vedu varipo, hapana pembedzo yekusaita zvemukati nekuburitsa zvakasarudzika zvevatengi zviitiko. Mumuenzaniso uyu wehembe uye homeware brand Inotevera zvinoita kuti uone kuti sei Kunzwisisa zvinodiwa nevatengi vavo kunogona kuvabatsira kuronga mishandirapamwe yeramangwana.
Iyi data ingaite senge yakasarudzika asi chero chinhu asi. Tichitarisa padyo nedhata raSotrender, inoratidza Inotevera chaizvo kwavanofanira kutora mishandirapamwe yavo mune ramangwana uye nemisoro ipi ingangobata vateereri vavo zvinobudirira. Kuve neruzivo urwu kwakakosha pakuronga mishandirapamwe yemunguva yemberi nekubatsira kuona kuti vakanyatsomira pamatanho epamusoro ekubatanidzwa.
Chii chinodiwa nevatengi vako? Iwe unogona kuziva zvaunoda kukudziridza asi ndizvo izvo vanhu vanoda? Kunyangwe isina kukumbirwa mhinduro kuburikidza nesocial media inogona kushandiswa zvakanaka mukugadzirwa kwechigadzirwa uye iwe unogona kusarudza kuenda nhanho yekuwedzera uye kubatanidza vatengi vako mukugadzirwa kwako kwechigadzirwa.
Coca Cola akaita izvi neyavo VitaminWater mhando sezvavari yakashanda neyavo Facebook fanbase kutsvaga mumwe munhu wekubatsira kugadzira hutsva hutsva. Uyo akahwina akapihwa madhora zviuru zvishanu kuti ashande nechikwata chekusimudzira mukugadzira iyo tavhu nyowani uye zvakakonzera huwandu hwakakura hwekubatana nevateveri vanopfuura mamirioni maviri eVitaminWater Facebook vateveri vanobatanidzwa mukugadzirwa kwechigadzirwa.
Kufuridzira Kuzivikanwa uye Targeting
Mukati mechikamu chega chega pane mavanonyanya kukurudzira vanokoshesa uye vanoteerera munharaunda yepamhepo. Mhando dzinozvirwira kuti dzibatane nevevanokurudzira, vachishandisa yakawanda yenguva uye kunyange mari yekudyara kugonesa vanokurudzira kusimudzira uye nekutsigira chigadzirwa chavo.
Nemacro uye ma micro influencers ari kudiwa zvakanyanya, bhizinesi rako rinofanira kutsvaga avo vanogona kutsigira bhizinesi rako uye vanowirirana zvakanyanya kune wako wekutarisira mutengi. Uine 'mutengi wekutanga' mantra iwe unofanirwa kunge uchitsvaga vanokurudzira vanoreva chimwe chinhu kune vateereri vako uye inogona kuve yakakosha yekuwedzera kune ako ekushambadzira, pane kungoti "chero munhu" ane zita uye ane hunhu vateveri kuverenga. Kuziva vanokonzeresa vakarurama vechiratidzo chako kwakakosha chaizvo kuti ubudirire mune hunyanzvi hwakavanzika hwe kushambadzira kushambadzira.
Iwe unoda kuisa yako brand seimwe iyo vatengi vanodada nekuitsigira, asi kuti uwane budiriro iwe unofanirwa kuve wakazara mutengi wakanangiswa. Zviri nyore kwazvo kuputirwa nehunyanzvi uye kukanganwa hunhu hwevanhu pane ako ekushambadzira. Tekinoroji iripo kubatsira uye kubatsira mukuendesa zvakanakisa zvevatengi zviitiko.
Tags: benchmarkingkukwikwidza ongororomutengi kutangaFacebooktarisa vateereri profiling